प्रहरीको जागिर छाड्ने संख्या बढ्यो प्रदेश एकमा - Purbeli News
प्रहरीको जागिर छाड्ने संख्या बढ्यो प्रदेश एकमा
जागिर छाडेका प्रहरी भन्छन : ‘बिभागिय व्यवहार’ कहिले सुध्रिएन
प्रकाशित मिति: बिहिबार, साउन २४, २०७५ समय: १७:४५:२९
इटहरी । नेपाल प्रहरी भित्रको ‘बिभागिय व्यवहार’ चित्त नबुझेको भन्दै प्रहरीबाट जागिर छाड्नेको संख्या बढ्न थालेको छ । आफु कार्यरत प्रहरी कार्यालयका सिनियर प्रहरी अधिकृतबाट सामान व्यवहार, पेलाउने प्रबृति र ओभरटाईम डिउटी लगाउन थालेपछि जुनियर प्रहरीहरु जागिर छाड्नेहरुको संख्या बढेको हो ।
चौधरी भन्छन् ‘नसिहत, स्पष्टिकरण, ग्रेड रोक्का जुनियरको लागी आम कुरा भइसकेको छ संगठन भित्र’ । यसको बिरोध गर्नु पनि आफ्नै खाल्डो खन्नु हो । इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीबाट केही दिन अघि मात्र राजिनामा दिएका एक पूर्व प्रहरी ‘हाकिमको मुडमा दुई सिफ्ट डिउटी गर्नु पर्ने अबस्था आफुले झेलेको बताउछन्’ । नाम नबताउने सर्तमा ति प्रहरी भन्छन् ‘शान्ति सुरक्षा सबल राख्न सम्बन्धित कार्यालयका इन्र्चाज संक्षम छैनन् भने सिपाही हवल्दार तथा अन्य अफिसरलाई पेलाएर के फाईदा’ ?
उनि आक्रोशित हुदै भने ‘यस्ता जागिर खाएर आफ्नो स्वभिमान किन गुमाउने’ ?
संबिधानमा प्रहरी सम्बन्धि नयाँ नियम भदौबाट आउने भएपछि पाउदै आएको सेवा सुबिधा कटौती हुने हल्लाको पछि लाग्नेहरुले पनि जागिर छाड्ने गरेको रिजालको भनाई छ ।
रिजाल भन्छन् ‘बुझदै नबुझी जागिर छाड्ने टे«न्डलाई अब भने हामी रोक्दैछौ’ । उनले सबै मातहतका प्रहरी कार्यालयमा सिनियर प्रहरी अधिकृत पठाएर जागिर छाड्नेलाई नयाँ नियम सम्बन्धि बुझाउन अभियान नै चलाउने जानकारी दिए ।